KAIST - Agụmakwụkwọ ka elu na n'elu mahadum South Korea
acronym : KAIST
tọrọ ntọala : 1971
Students (ihe ruru.) : 11000
Echefukwala atụle KAIST
Idebanye aha na KAIST
kwesịrị nsọpụrụ Ọbịa, Onyeisi oche Myung Oh; Trustees Gil-Saeng Chung na Sam-Sọl wee Pyo; Mbụ Oche-adịghị anya-Dal Choi na Chang-Sun Hong; mbụ so na National Assembly, Mr. Yong-Kyung Lee; Onyeisi oche Dae-IM Kang nke Association of ndị isi nke S&T Organizations na ya so isi – President Young-Myung Choi nke Korea Institute of Nuclear Nonproliferation na Control, President Young-Joon Kim nke Gwangju Institute of Science and Technology; na Nwada. Sọl wee-Young Lee, na Chairperson nke KAIST Development Foundation, onye na-adịghị egbughị ya ike na-arụ ọrụ maka KAIST n'akụkụ Mr. Eung-Sun Lee, osoje Chair nke Foundation, Vice President Ikowe-Ku Chung nke KAIST School Kwado Association, President Kwi-Roh Lee nke National Nano ae Center, President Doo-kwurịtara ihe kpatara Kim nke Korea Institute of Advanced Sciences, Prọfesọ Jang-Hyuk Kwon, ihe bụ isi na nke Korea Science Academy, -akwanyere ùgwù ngalaba na mkpara, klas nke 2017, -alọta ụmụ akwụkwọ, Alumni, nne na nna, ndị ikwu m na ndị enyi, ma lezie nwunye m Myoung A (m) Kang, M kasị ji obi ekele unu maka ịbụ ebe a maka mmalite nke 15th KAIST Mọsko.
N'ihi na m na-guzo n'ebe a taa bụ iche bara uru na-eweta ọtụtụ echeta site n'oge gara aga. Kpọmkwem afọ iri ise gara aga, na January nke 1963, M nọ na ọzụzụ agha dị ka a ọhụrụ enlistee nke klas nke 111 (111 ndikom) nke Korean Ikuku Force ebe a na Yuseong. M nọrọ ọnwa abụọ e maka isi agha ọzụzụ, na 9 ọnwa maka oru ọzụzụ electronic nkwukọrịta ngwá ọrụ. The ọnwa ahụ bụ January idiọk oyi na okpomọkụ nke -20 ogo Celsius - ọ bụ otú ahụ oyi na-atụ na eziokwu ahụ bụ na Incheon n'ọnụ mmiri e oyi kpọnwụrụ. Na November m ama ahụ zigara ndị Air Force isi na Kangneung, Kangwon-Hà. Echetara m na ka m na-eche na Osan maka rụpụtara ụgbọelu ka Kangneung, M nụrụ akụkọ ọjọọ ahụ na President John F. Kennedy gbagburu na Dallas, Texas, nke bụ nnọọ awụ akpata oyi.
na 2002, M a na ịga na prọfesọ nke KAIST na n'oge na okpomọkụ enwere m obi ụtọ nke na-ekiri Korean National bọl-abịa si n'azụ na-emenụ, ndị dị ike Italian otu 2:1. Ruo taa, M na-echeta n'ụzọ doro anya ndị na abụọ dị ịrịba ama mgbaru ọsọ gbatara site Korean otu, na n'echiche nke mpako n'ihi mba na nchekwube.
taa, M laghachi Yuseong ije ozi dị ka ndị ọhụrụ KAIST president. Ọ bụ ihe ùgwù na, ma nke ahụ na-ebu on bụ mba ha uru na ihe ịma aka n'ọtụtụ ụzọ.
KAIST e guzobere 1971 ya okobot mgbaru ọsọ, dị ka kwuru KAIST n'usoro ochichi isiokwu 1, mbụ, ịkụziri na Ezi-top-ụgbọ elu ga-eme n'ọdịnihu ọkà mmụta sayensị onwem na rigorous isi usoro iwu na ike maka ndị bara uru ngwa; nke abụọ, na-ebu ma na-okwu na-adịghị adịte aka isi na n'ọrụ nnyocha na-enyere ndị mba emeri na nkà na ụzụ ọganihu; na atọ, inye research collaborations na a iche iche ọdọ mmiri nke nnyocha oru na ụlọ ọrụ
N'okpuru ndị dị otú ahụ a ọkọlọtọ KAIST emewo uto nke sayensị na technology ụlọ ọrụ na Korea n'ihi na n'oge gara aga 40 afọ kemgbe ya oruru na, aghọwo a ụwa ghọtara pụrụ iche nnyocha mahadum, ekele na pụtara ìhè ngalaba na mkpara raara nye magburu onwe nnyocha na agụmakwụkwọ nke ọdịnihu anyị isi. Ekele miri emi bụkwa n'ihi m iso, Dr. Nam Pyo Suh ndị ọzọ bụbu isi na ha administrative otu òtù, onye na-arụ ọrụ n'akụkụ ha.
taa, ọtụtụ KAIST na-agụsị akwụkwọ na-eme ọwọrọiso onyinye dị iche professors na agụmakwụkwọ ka elu na-asụ ụzọ na-eme nnyocha na ndị ọkà mmụta sayensị na injinịa ubi.
Dị nnọọ a izu gara aga, mụ na nwunye m na a kpọrọ a KAIST Alumni n'ikuku na International Solid-State na sekit na sekit Conference (ISSCC) na San Francisco, nke e gara site ọtụtụ KAIST Alumni, ugbu a ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ha, na ọbịa. M mụtara na afọ a otu ugboro ọzọ, KAIST ọkọnọ kasị akwụkwọ na ISSCC ebe ọkọlọtọ mmanya nke nabata bụ ezi elu. Nke a bụ otu ihe gosiri na otú KAIST na-eru ọhụrụ elu. The KAIST ngalaba na ụmụ akwụkwọ e bipụtawo ọtụtụ akwụkwọ na ndị dị iche iche n'ụwa nile-akwanyere ùgwù magazin dị ka Nature na Science.
KAIST ga-anọgide na-aga karịa ndị a na mbụ rụzuru, na KAIST ga-a dị ike engine maka akụ na ụba na ulo oru ọganihu nke Korea. Dị ka otu mba kọrọ a miri emi ọdọ mmiri nke eke ego, Korea ga-ahụ achọpụta ihe ọhụrụ ụzọ ka mpi n'ụwa nile iji hụ na ọganihu na ọdịmma nke ndị bi na ya. KAIST ga-eme ya kacha mma na-edu mba kwupụta n'ókèala sayensị na technology ji ịnụ ọkụ n'obi na ibu ọrụ.
Na-abịa n'ụbọchị, KAIST kwesịrị eto n'ime a nnukwu mkpụrụ osisi na ubi nke nnyocha na agụmakwụkwọ, tụkwasịrị obi na-akwanyere ùgwù bụghị nanị na Korea, kama n'ụwa nile. Malite site na Korean dịịrị banye na mmiri, na mgbọrọgwụ ya kwesịrị mere n'ihe n'ofè mba nile ndị dị, -agabiga ise oké osimiri ka ọtụtụ kọntinent isere na a ọgaranya na iche iche set nke ụwa-klas echiche na innovations na-emepụta mkpụrụ ya - kwadebere nke ọma gụsịrị akwụkwọ bụ ndị a ga-akwanyere ùgwù ndú na nkwado ọha.
A ụwa ejikọrọ mmụta dị mkpa n'oge a na-amụba ahia nyeere site elu internet, supersonic ụgbọelu, na supersize n'ụgbọ mmiri. KAIST na-agụsị akwụkwọ ga-kpọrọ dị ka ihe ọhụrụ na na-omimi ọmụma, creativity, ike n'ihi na ike imekọ ihe ọnụ ma doo anya na nkwurịta okwu na were were na-asụ asụsụ. Na ebe ọ bụla ha na-aga, ha nwere ike ịnọgide na-agbasa ha ụkpụrụ ọma, ụkpụrụ, nkà na ihe ọmụma, na site na anyị nwere ike niile na-ele ka KAIST osisi awa okooko n'ụwa nile.
The mgbaru ọsọ kasịnụ nke sayensị, technology na management idu ke ọdịmma nke anyị na otu. Na a ọdịmma ga-nwetara na mahadum dị ka mmụta ụlọ, agbata obi na mpaghara, mba na ụwa.
Ná mgbalị ya iji nwetara a ọdịmma nke ọha mmadụ na, KAIST ya tara ahụhụ eto Amidst ya ịrịba ama uto. Anyị ga ebelata ihe mgbu site ntụkwasị obi na nchebara echiche maka ibe, ma sonyere na ịdị n'otu na-nzọụkwụ n'ebe na ọdịnihu ka mma nke KAIST. M ji obi umeala na-achọ enyemaka gị, na nkwa iseti m ike na mgbalị dị ka ohu ndú.
Ị pụrụ ịma ndị a nkiri a na-akpọ "The Mission". Na nke a film, na mercenary na ohu ozu ahia egwuri site Robert De Niro akpali on si a jupụtara ná nsogbu ndụ na-eso a umeala n'obi Jesuit nchụàjà na-amalite ndụ ya n'isi. Ke kiet ke otu idaha, De Niro onye nchụàjà na-arịgo elu a nkpoda nsụda mmiri n'elu ugwu. Mgbe ha mechara ya ndị kasị sie ike ọrịrị, -arụ ya na ya dị oké ibu ngwongwo dị ka a penance maka nmehie nile nke, ha na-kwara site a ìgwè nke ụmụ afọ India, onye bipu ibu na ama esịn ya n'ebe kpọdara akpọda. Mgbe ọ na-adịghị mfe na De Niro ka nwere furu efu ya jibu kpọrọ ihe, ibu arọ-ya di site na onye ọ bụla, na ndụ ha wee na-atụ.
-Emeghe a ọhụrụ isi, KAIST ga-agbalịsi ike dị otú ahụ obi ike. Kama ịrụwa ụka na ụta ndị gara aga hotara ihe ọjọọ, KAIST ga ịgụnye elekwasị anya na ya ga-eme n'ọdịnihu na-eme ya ike na-ebu ihe ndị dị mkpa ihe aga-eme n'ihu. Anyị ga-enyere onye ọ bụla ọzọ nyak si anyị amarala ejidesi ihe ndị ga-eme ka njem anyị na anyị ozi Ndụ Ọjọọ na isi siri ike. Mụ na nwunye m bụ ndị a na-arụ ọrụ gị maka iwuli elu KAIST n'ihi nne anyị mba.
The mbubreyo ndú ime mmụọ Mahatma Gandhi dọrọ aka ná ntị megide nnukwu asaa mmehie. N'etiti ha ndị kasị mkpa ka KAIST bụ 'sayensị na-enweghị akọnuche,'' Ihe ọmụma na-enweghị agwa,'' Ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-enweghị ụkpụrụ,'Na' okpukpe na-enweghị àjà. 'Anyị ga-agbalịsi ike na-akwalite sayensị, ihe ọmụma, na agwa na a doro anya na akọ na uche, nkwụsi ụkpụrụ na njikere àjà.
KAIST, iji ghọọ onye ndú na-eme ka ndị ọkà mmụta sayensị, technology na ulo oru mmepe, ga-eme nke ọma na ndị na-esonụ ise ebe - ọ bụla doo iji ise akwụkwọ ozi anyị na alụmdi aha.
Firstly, "K" bụ maka ihe ọmụma e kere eke. Faculty òtù na ụmụ akwụkwọ ga-anwa anwa gaa na-asụ ụzọ nnyocha ike ọhụrụ ihe ọmụma na nkà na ụzụ. KAIST ga-imekota na pụtara ìhè research emmepe domestically na Daedeok Industrial Park na n'ebe ndị ọzọ, na mba ndị ọzọ n'ụwa nile gụnyere ndị nọ Silicon Valley. Elu-uru ihe ọmụma e kere eke-achọkarị ụwa-otu ụlọ ọrụ na-enye nkwado na gburugburu ebe obibi. Anyị ga-eme ike anyị nile iji na-akwalite nọ n'ọrụ nkwado na njikọ aka site ọchịchị na ndị ọzọ na-eduga na òtù.
Lecture ụlọ nzukọ na ndị ọkachamara 'nnyocha laboratories na-isi-iyi ọhụrụ ihe ọmụma e kere eke. Na-amụrụ na-eche nanị na ngalaba na-ada nnyocha na mmemme, -akpali ike- -arụ ọrụ na ụmụ akwụkwọ, ma gụsịrị akwụkwọ na Undergraduate, nwere ike dị ukwuu-erite uru site iche iche na pụrụ iche ohere. Otú ọ dị, ọ bụghị ihe niile na-arụpụta na-eme nnyocha bụ ogologo A ụmụ akwụkwọ. M na-echeta onye pụtara ìhè nnyocha na Mahadum nke California, Berkeley mgbe m gụsịrị akwụkwọ na-amụrụ. Ya research nọ karịrị ihe, na ọ nọrọ na ehihie na abalị na laabu eduzi nwere. Ọ ka ga-abụ na ya bench gafere etiti abalị, ọbụna ma ọ bụrụ na nnyocha a ga-enye ụtụtụ. Ọ na-na-niile Dị, ma ihe ọmụma e kere eke, ọ bụ abụọ ọ bụla. N'oge na-adịghị mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ ọ malitere itu n'anya ụwa site na ọtụtụ nnyocha breakthroughs. KAIST ga akpọrọ ma na-akwado ndị dị otú ahụ talent, ma ọ bụ a mba ọnwụ.
Interdisciplinary nnyocha ga-agba ngagharị untraveled n'ókèala ebe ọtụtụ ihe bara nnukwu uru pụrụ ịchọta. Na a nnyocha mahadum, onye agụmakwụkwọ ngalaba kwesịrị emmepe nke kacha mma. Ọ nwere ike iji tụnyere a zuru okè okirikiri ma ọ bụ a bọl. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ihe ọmụma ohere nke KAIST a ga-jupụtara na ngalaba naanị, mgbe ahụ 48% nke dum ohere ga-anọgide egboro, nke bụ ohere inyocha maka earthshaking research.
Interdisciplinary nnyocha na-akpọ maka ngalaba òtù dị iche iche agụmakwụkwọ ngalaba anya imekota site n'imebi mgbidi na-esi merie chefuo ahụhụ. Kanyere n'ọnụ ụzọ ụlọ nzukọ nke Bell Labs, Murray Hill, New Jersey bụ ozizi Alexander Graham Bell nke jụrụ ileta unexplored n'ókèala na-ahụ ihe ọhụrụ ndị.
KAIST kwesịrị ịnọgide na-akwalite ma na-akwado na-eme nnyocha isonye na interdisciplinary nnyocha omume na institutes dị ka KAIST Institute na ndị ọzọ ji nkwenye na ịnụ ọkụ n'obi.
Nke abuo, "A" bụ maka ọganihu nile asakde iso ese. on January 30, Nara-ho e ọma ulo oru na-kanye akara gburugburu ụwa iji kpokọta na-ebunye ọmụma nke ga-erite uru niile ndị mmadụ gburugburu ụwa. Na dị ka Nara-ho, KAIST kwesịrị ẹkedori onwe ya ka a elu elu mee ka ụwa anyị a ka mma ebe.
Na-a ụwa na-eduga na ulo akwukwo, KAIST ga-eme ya kacha mma iji nwetara dị mkpa na-akwado ma omume na-akpata ego. Ọ bụla nọ KAIST ga nwere okwukwe ha siri ezigbo nkwenye na ihe nile nwere ike mere mma, na-achọpụta ihe ọhụrụ ụzọ pụrụ ịchọta nakwa na ihe nwere ike melite. Omume ọma a ga-wuru na-eme unceasingly. KAIST ga-ahụkwa ụzọ ka mma ya n'ozuzu arụmọrụ.
KAIST ga-ahụ ụzọ iji ike collaborations na Institute maka Basic Science na ọtụtụ nnyocha emmepe na Daedeok Industrial Park. Ọ maara nke ọma na ihe ịga nke Silicon Valley ka hinged na nnyocha na agụmakwụkwọ nke ndị agbata obi mahadum dị ka Stanford, Berkeley, na San Jose State. Dean Frederick Terman nke Stanford University ume ma nyere aka William Hewlett na David Packard kee Hewlett-Packard Company.
N'ọdịnihu ụkpụrụ nke KAIST kwesịrị ka a remade na ịchọ ndụmọdụ ya nile mejuputara na Board of Trustees. Co-nwe nke ndị dị otú ahụ na-efe ya ike ga-eji kpọrọ ihe, ẹkama na ghọtara na na-ekere òkè nile.
thirdly, "M" anọchi Ike n'Ezi. Ike n'ezi ihe nke KAIST ga-hụ a anọgide ezi nguzozi n'agbata ozizi na omume, nnwere onwe na ụkpụrụ, ikwu eziokwu na imekọ ihe ọnụ, na uru na edinam. Eguzosi ike n'ezi ga-akpọrọ ihe ma na-eme ihe nile research akwụkwọ, ego management, na mmekọrịta ụmụ mmadụ.
Ọtụtụ afọ gara aga m gara nnọkọ mba na Kos Island, Greece. N'oge a njem m mụtara ihe banyere iguzosi ike n'ezi site a kpara akụkọ. Dị ka akụkọ, a ọkpụ a họpụtara na-emepụta a bust na-echeta a hụrụ n'anya dike. Ma, ọ nọ na-ewere kwa ogologo na onye na-ahụ maka oru ngo gara ọkpụ na ajụjụ mere ngwaahịa enweghị ike ịnapụta ozugbo. Ya ọ hu ka a mere, ma ọkpụ kwuru na ya chọrọ oge iji gwụ ahu ga n'azu. Na obi nkoropụ esenowo jụrụ onye ga-elekọta ịhụ backside. Ọkpụ ahụ zara, "My asọpụrụ Chineke na-ahụ ahu ga n'azu."
M kwere na a onye ma ọ bụ òtù na-eguzosi ike n'ezi nwere ike ịtachi obi ma na-adịru Ogologo oge. Eguzosi ike n'ezi kwesịrị a n'onye ahụ nke na KAIST.
Fourthly, "S" bụ maka nkwado. Education na nnyocha na KAIST ga-emecha na-achọ adigide ezi-okwu. Research themes onwe ha ga-adigide na-adịghị gabiga ókè chụpụrụ site mkpụmkpụ-okwu mgbaru ọsọ. The EEWS omume kwara isi okwu ndị metụtara ụwa na Energy, Environment, Mmiri na nkwado. Na ihe ịga nke nkwado na-akwali nnyocha na mmepe, KAIST ga-ebili ka a top-echelon zuru ụwa ọnụ ndú na sayensị na nkà na ụzụ. Nkwado-chụpụrụ research ga oge ntoju n'okpuru ukwuu agbamume na nkwado. Ọtụtụ mgbe research ga esi na-tụrụ site a tikeeti index, ma dịkwa mkpa dị ka àgwà obi sie site nke mmadụ ji nkwenye siri ike, na ntụkwasị obi.
M nwere ike mma n'ụzọ pụrụ on a site n'ihota ihe atụ nke Dr. Claude Shannon onye mere nnyocha na AT&T Bell Labs na mesịrị ghọọ a prọfesọ na MIT. O bipụtara ufat ma onye ọ bụla nke ya akwụkwọ bụ a ọla. Ruo taa, ya ozi tiori na-agụnye etinyere. Anyị kwesịrị iji na-akwado KAIST-eme ka ọtụtụ adigide onyinye nke otu caliber.
Fifthly, "T" bụ maka Trust. KAIST ga-enwe alụmdi nke a na tụkwasịrị obi site ọchịchị, ndị bi na ya, na nne na nna nke ụmụ akwụkwọ. Trust na lere dị ka ihe bara uru dị ka ike ego.
The omenala ntụkwasị obi ahụ kwe omume site nghọta ma na-elekọta ibe anyị na ọnọdụ. Trust ga-adịgide adịgide mgbọrọgwụ na kampos dị ka akụkụ nke KAIST omenala mgbe ngalaba, mkpara na ụmụ akwụkwọ, ndị nile so na nke KAIST obodo, -ege ntị na-aghọta ọtụtụ dị iche iche echiche na echiche ndị ọzọ jide ma na-eso onye ọ bụla ọzọ rụzuru na ezi obi ekele maka ibe. Ọzọkwa, mgbe anyị raara onwe anyị ime anyị akụkụ obodo na nke mba na-elekọta mmadụ na mbọ na sayensị na nkà na ụzụ ndị nganga na mmetụta nke ọrụ, ọ ga-enwetaghachi na-ewusi ntụkwasị obi mba na ọha na eze, nakwa dị ka ndị zuru ụwa ọnụ ọha mmadụ na, jide maka KAIST. On a ibu ọnụ ọgụgụ, anyị kwesịkwara ka e a tụkwasịrị obi na alụmdi chọrọ site na ọtụtụ ndị ọkachamara na ụmụ akwụkwọ ná mba ọzọ. Na ndị dị otú ahụ ntụkwasị obi ike, KAIST gụchara akwụkwọ na ndị Korea nwere ike ịhụ ihe na ibu ohere n'ụwa nile.
Iji ichikota, KAIST kwesịrị ịrịba ama n'ụzọ ele ihe ọmụma ndị e kere eke, ike ọganihu, eguzosi ike n'ezi, nkwado, na ntụkwasị obi.
KAIST ruru ya n'ọnọdu-ya ka a ụwa ghọtara mahadum site na iji obi ha dum nkwado nke ndị Korea. M na-aghọta na kwara KAIST isonye nke ụwa-eduga mahadum na-agbalị inwe site na otu site na-aga n'ihu mgbanwe na ọhụrụ bụ nanị ụzọ ka ha laghachi ịhụnanya na enyemaka nke mba, nke bụ nnọọ ozi m na-akpọ n'elu na-na dị ka m na-eguzobe n'ime KAIST Mọsko.
okpono ọbịa, ezinụlọ na ndị enyi, Ga-amasị m ikwu na otu ihe kama dị mkpa item tupu m ijide m okwu.
ikpeazụ, ma ọ bụghị dịghị ihe ọzọ, Ga-amasị m ikele ndị Klas nke 2017 n'ihi na gị rụzuru. Ị kwụsịrị di ọku mpi na-abịa ka KAIST, na ị tachiworo site rigorous nsogbu iru a. Ọ bụ ezie na unu na ike agonized n'ihu na-eme mkpebi i debanye aha ebe a, ị họọrọ iji amamihe. All ndị òtù nke KAIST ezinụlọ ga-eme ike ha iji hụ na gị n'ọdịnihu ịga nke ọma dị ka ị na-akpali n'ofè ndị a mgbidi. My ụzọ bụ mgbe niile n'ọtụtụ ebe oghe maka ị gaa na, na m ga-mgbe niile welcome na akpọrọ gị ajụjụ, kwuru na aro.
nne okuko ọ na-abịa mmụta na nduzi n'ozuzu, biko jide n'aka na KAIST ọkachamara na-akwado ndị ọrụ na-ebe a maka ụmụ akwụkwọ na ha ezigbo uru.
klas nke 2017, nwere ike ịga nke ọma gị n'oge KAIST na karịrị ịbụ a magnet-adọta ndị ọzọ nwee nkà elu ụmụ akwụkwọ maka a sayensị na injinịa muta. KAIST professors bụ gị ga-achọ ịdị na nwere ike ịbụ gị-adịru ogologo ndụ mentors na-azụ.
onwe, ọbụna mgbe ihe karịrị 40 afọ kemgbe m gụsịrị akwụkwọ Berkeley, mụ na nwunye m na-aga ileta m nkụzi na Berkeley, Ọkachamara Leon Chua na Ernest Kuh, na-enwe nri ọnụ na-enwe na-akpachi anya na mkparịta ụka na ọtụtụ akụkụ nke ndụ. Dị nnọọ a ọnwa, ha nwere obi ụtọ ịnụ m nraranye dị ka KAIST President ma nye kasị mma chọrọ maka m ọrụ ọhụrụ na KAIST.
Ezigbo kwesịrị nsọpụrụ ọbịa, Kelee m gị maka ịbụ ebe a taa na-akara mmalite nke ọhụrụ a isi na KAIST. M ji ezi obi kwere na-arịọ na nkwado gị ga-anọgide na-enwe ọganihu KAIST na-erite uru anyị niile, mba-ayi, na ụwa.
President of KAIST
Ukpep School of Nanoscience & Technology
Department of Medical Science and Engineering
School of Mechanical, Aerospace na Systems Engineering
Ukpep School of Ocean Systems Engineering
School of Ọdụdọ Engineering
Ukpep School of Web Science and Technology
Ukpep School of Information Security
Department of Bio & Brain Engineering
Department of Industrial na Systems Engineering
Department of Chemical na Biomolecular Engineering
Department of Nuclear na kwantum Engineering
Department of Ozi na Nkwurịta Okwu Engineering
The Cho Chun Shik Ukpep School maka Green Transportation
Ukpep School of EEWS (Energy, Environment, mmiri, na nkwado)
College of Liberal Arts na Convergence Science
Department of Humanities na Social Sciences
Ukpep School of Culture Technology
Department of Business na Technology Management
Ukpep School of Future Strategy
Ukpep School of Science and Technology Policy
Ukpep School of Management
Ukpep School of Finance
Ukpep School of Information & Media Management
Ukpep School of Green Uto
Na ulo akwukwo e hiwere na 1971 dị ka Korea Advanced Institute of Science (Kais) site a ego nke US $ 6 nde (US $ 34 nde 2014) si United States Agency for International Development (USAID) na-akwado site na President Park Chung-ne[ Na ulo akwukwo nke agụmakwụkwọ atụmatụ a tumadi mere site Frederick E. Terman, osote onyeisi oche nke Stanford University, na Chung Geum-knife, a prọfesọ na Polytechnic Institution of Brooklyn. Na ulo akwukwo nke isi ihe abụọ na ọrụ ndị na-azụ elu ọkà mmụta sayensị na ndị injinia na ịzụlite a Ọdịdị nke gụsịrị akwụkwọ mmụta na mba. Research ọmụmụ malitere site 1973 na undergraduates mụọ maka Bachelor si degrees site 1984.
na 1981 ndị ọchịchị chịkọtara Korean Advanced Institute of Science na Korean Institute of Science and Technology (KIST) na-etolite na Korea Advanced Institute of Science and Technology, ma ọ bụ KAIST. N'ihi iche iche research nkà ihe ọmụma, KIST na KAIST kewaa 1989. N'otu afọ KAIST na Korea Institute of Technology (gaa) jikọtara na kpaliri site Seoul na Daedeok Science Town inDaejeon. The mbụ omume nke President Suh ya nraranye na July 2006 bụ dina na KAIST Development Plan. The 'KAIST Development afọ ise atụmatụ' e fọrọ on February 5, 2007 site KAIST n'iru Committee. The ihe mgbaru ọsọ nke KAIST setịpụrụ Suh ga-aghọ otu nke kasị mma ndị ọkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ mahadum ụwa, na-aghọ otu nke n'elu-10 mahadum site 2011. na January 2008, na mahadum ama esịn ya zuru aha, Korea Advanced Institute of Science and Technology, ma gbanwee ya ukara aha naanị KAIST.
Ị chọrọ atụle KAIST ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
KAIST na Map
photos: KAIST ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke KAIST.